Dooni ku degtey Beyla ka dib dufaan
25 Dec 25, 2012 - 3:15:18 AM
Wararka laga helayo Degmada Bander Beyla ee gobolka Karkaar
ayaa sheegaya in Dooni ku socotey Magaalada Muqdisho ay ku degtey Badweynta
Hindiya meel u dhow Xeebta Bayla.
Agaasimaha waaxda Dowladaha Hoose ee wasaarada arimaha
gudaha Puntland Jaamac Xasan Xuseen oo howlo shaqo u jooga Degmda Bandar Beyla
ayaa Radio Garowe uga waramay xaalada Bayla iyo doonta degtay.
Dadka deegaanka ayaa sheegaya inay arkeen qaar ka mid ah
alaabtii saarnaa Doonta,waxaase ilaa iyo hada la hayn dadkii saarnaa doonta
inay dhinteen iyo in kale.
Mamulka Degmada Bandar Bayla ayaa hada ku howlan gurmadka loo fidinayo dadka
doontaasi saaran,inkastoo baduna ay kacsan tahay hadana waxaa socda gurmadka
dadka lagu soo bad baadinayo.
Dufaanta Faul 4 ayaa horey looga digey Xeebaha Badweynta
Hindiya magaalooyinka ku yaal ,waxana ilaa iyo haatan aan si dhab ah looga war
hayn inta uu garsisanyahy khasaraha ay gaysatey.
Halkan ka dhageyso wareysiga uu qaadey Wariye Cali Fantastic